Ny lanonam-panokafana ny Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia natao tamin'ny 5 Novambra tolakandro
Ny lanonam-panokafana ny Mersen Zhejiang Co., Ltd. dia natao tamin'ny 5 Novambra tolakandro. Nanao kabary ny lefitry ny sekretera lefitra ary ny sefon'ny distrikan'i Changxing County Yiting Shi. Tao amin'ny kabariny, nilaza i Yiting Shi fa ny lamin'i Changxing dia tia liona mpandihy foana, miaraka amin'ny ...
Ny toerana mahafinaritra an'i Yuliao dia misy an'i Yuliao, Tanànan'i Mazhan, izay any atsimo atsinanan'ny Cangnan County, Faritanin'i Zhejiang. Ny atsinanana dia mifanila amin'ny ranomasina, ary ny atsimo dia eo akaikin'ny tanànan'i Xiaguan, ary ny avaratra dia mihidy amin'ny tanànan'i Chixi, mandritra izany ny lafiny andrefana mankany amin'ny tanànan'i Mazhan. Mandrakotra 18.5 toradroa ki ...
Mersen dia mahazo ny mari-boninahitra CSR (andraikitra ara-tsosialy orinasa) amin'ny 2020
Mersen dia tompon'andraikitra tamin'ny mpanjifa, ny vondrom-piarahamonina ary ny tontolo iainana ary namorona tombony ary miantsoroka andraikitra ara-dalàna ho an'ireo tompon-trano sy mpiasa. Mino izahay fa ny andraikitra ara-tsosialin'ny orinasa dia mitaky orinasa hihoatra ny foto-kevitra nentim-paharazana hoe maka profi ...
Mba hanamafisana ny fahatsiarovan'ny mpiasa rehetra ny fiarovana ny afo, sy hanatsarana ny fahaizan'izy ireo amin'ny fisorohana ny afo sy ny fanamaivanana ny voina, mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, dia nanao soa aman-tsara ny afo tamin'ny marainan'ny 9 Oktobra 2020, izay iray izahay iray volana mialoha ny fiarovana ny afo nasionaly ...